Cardlytics: Bhengi Kadhi-Yakabatanidzwa Kushambadzira | Martech Zone
Mugovera, October 19, 2013 China, Gumiguru 17, 2013 Douglas Karr
Kugona kwako kunongedza vatengi zvichienderana nejogirafi uye nhoroondo yekutenga iri kuramba ichivandudza. Masangano ezvemari anogona ikozvino kuvhura gedhi kune mibairo, kuvimbika zvirongwa uye zvinopihwa zvakatengwa zvakananga uchishandisa kadhi rako rekubhangi. Kadhi-Yakabatanidzwa Kushambadzira (CLM) ndipo apo vatengesi vanosvika kune vatengi zvakananga kuburikidza nezvitatimendi zvebhangi zvepamhepo. Muchokwadi, Bank of America iri kutoshandisa Cardlytics kusimba BankAmeriDeals.
Kune Vashambadziri, maCardlytiki anounza akananga pachiyero, kubhadhara-kwe-kuita mitengo uye chiyero chaicho
Target vatengi vanoenderana nehunhu hwavo: nzvimbo, kuwanda, zvachose kushandisa.
Hunyanzvi mushandirapamwe wakasarudzika kune rakatarwa boka revatengi.
Kuyera kweVatengi: kuwedzera marongero evatengi, kutengesa, maitiro ekutenga-shure.
Vashambadzi vanobhadhara chete mhedzisiro: kuyerwa kuwedzera kwekuwedzera.
Kune Vatengi, maCardlytics anounza chiitiko chakasarudzika icho chiri nyore uye chinobata
Vatengi vanoona zvakasarudzika kushambadzira zvinoenderana nekutenga kwekare.
Vatengi vanosarudza kushambadzira uye mibairo inotakurwa pakarepo padhidhi kana kiredhiti kadhi.
Vatengi vanongotenga nekubhadhara nekadhi.
Vatengi vanowana mari kudzoserwa kunzi yavo account.
Kubhengi kwepamhepo izvozvi kune 53% yemabhangi transaction uye maCardlytics akatyaira angangoita madhora mazana mashanu nemakumi mashanu emamiriyoni mukutengesa kwekutengesa muQ512 2!
Tags: kadhi rebhangicardlyticskuvimbikamibayiro
Brightcove: Iyo Inotungamira Pamhepo Vhidhiyo Platform